Madaxweyne Deni oo fajiciso ku tilmaamay xeerarka canshuuraha, badroolka iyo doorashooyinka ee ay DFS u gudbiyay baarlamanka – Kalfadhi
Madaxweyne Deni oo fajiciso ku tilmaamay xeerarka canshuuraha, badroolka iyo doorashooyinka ee ay DFS u gudbiyay baarlamanka
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa sheegay in ay walaac weyn ku abuurtay sharciga canshuuraha ee toddobaadkan ay xukuumadda FS horgaysay golaha shacabka BJFS.
Madaxweynaha ayaa sheegay in shirkii mudada lixda cisho ah Garowe uga socday madaxda federaalka iyo dowlad-goboleedyada la isku mari waayay xeerarka doorashooyinka iyo badroolka ee baarlamanka la geeyay, wax yar ka hor intuusan shirku dhicin.
“Waxaa aniga igu riday kalsooni darrada, in iyadoo sidaas ah haddana la gudbiyay sharciga canshuuraha oo ah meelaha ugu adag ee nidaamka federaalaynta” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Wuxuu sheegay in arrinta canshuuruha heer dowlad-goboleed iyo heer federaal sida loo wada-qaadayo iyo sida loo qaybsanayaba ay tahay mid la wada leeyahay oo ay ku jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in laga heshiiyo ka hor inta aan la geyn baarlamanka.
“Aragtida dowladda ee sannadkii la kala maqnaa meesha ka soo baxday waa in dalka shaqadiisii u socoto si (Centralized) ah, sidii dowlad dhexe” Ayuu yiri Deni oo sheegay in dastuurka KMG ah ee dalku uu kala cadaynayo shaqada DF iyo dowlad-goboleedyada
Golaha shacabka ayaa akhrin ku wada xeerarka badroolka iyo canshuuraha oo isna golaha loo qaybiyay toddobaadkan. Xeerka doorashooyinka oo muran badan dhaliyay ayaase xukuumaddu ansixisay isagoo la filayo in baarlamanka la geeyo inta lagu jiro kalfadhigan.
Madaxweynaha oo shir jaraa’id ku qabtay Garowe ayaa arrintan ka hadlay mar uu faahfaahin ka bixinayay sababaha aysan waxba uga soo bixin shirkii wada-tashiga ahaa ee uu marti-geliyay, kaas oo madaxda federaalka iyo dowlad-goboleedyada mudo lix cisho ah u socday, balse aysan waxba ka soo bixin.
Madaxweynaha Puntland wuxuu shaki geliyay doorka dowladda federaalka ah oo uu sheegay in ay u muuqato mid ka caga-jiidaysa hannaanka federaalaynta dalka.
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Galmudug oo ku taliyay in Ardayda ay joojiyaan banaanbaxyada Socda
Qaar kamid ah Xisbiyada dalka oo ka soo horjeestay Sharciga doorashooyinka oo ay Ansixiyeen Golaha Wasiirada